အနီရောင်လမ်းကလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » အနီရောင်လမ်းကလေး
Posted by DEPARKO DEPARKO on Feb 2, 2012 in Contributors, Copy/Paste |9comments
ကျွန်တော့်အမေ မသေခင်က ကျွန်တော့်ကိုဆုံးမခဲ့တဲ့စကား ဘာလုပ်လုပ် အကျိုးရှိအောင်လုပ် အရည်မရ အဖတ်မရ အလုပ် ဘယ်တော့မှမလုပ်လေနဲ့
တံတားဦးက ကွမ်းနုဝါ ငန်းမြာကဆေး အစရှိတဲ့ ရှေးခေတ်စာဆိုတွေဖွဲ့နွဲ့ခဲ့ရတဲ့ ကွမ်းပါ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ အလှူ၊ သာရေး၊နာရေး၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ဧည့်ခံပွဲ၊ ကင်ပွန်းတတ်၊သူမပါရင်မပြီး၊ပွဲတင်ရင်တောင် ကွမ်း၊ဆေး၊လက်ဘက်၊ပါစမြဲပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဘာလုပ်လုပ် အလွန်အကျွံလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရယ် စည်းမရှိကမ်းမရှိ ပြုမူတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ လမ်းမတွေဟာ ကွမ်းတံတွေးတွေနဲ့ ရဲရဲနီနေပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက တင်သွင်းတဲ့ ဆေးမျိုးစုံနဲ့ ကွမ်းကိုအလွန်အကျွံစားမိလို့ အသက်ပျောက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလဲ မကြာခဏဆိုသလို ကြားနေရပါတယ်၊ ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီးတိုက်ဖျက်ရေးကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ ကွမ်း(ဆေးမျိုးစုံ)စားခြင်းဟာနေရာအနှံ့အပြား လူတော်တော်များများ(အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များပါ) စွဲလမ်းနှစ်ချိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊ ကွမ်းစားတဲ့နိုင်ငံကလဲ နဲနေလေတော့ ကွမ်းထဲပါတဲ့ဆေး(ဆေးရွက်ကြီး) ကြောင့် ရနိုင်တဲ့ကင်ဆာလိုရောဂါ၊တီဘီရောဂါ၊အခြားရောဂါတွေကို စနစ်တကျ သုသေသနလုပ်ပြီး ထုတ်ပြန်တာမရှိလေတော့ ကွမ်းစားတာ ဖက်၇ှင်တစ်ခုလို ကွမ်းတံတွေးတွေကို စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ကားလမ်းမပေါ် ထွေးချနေကြတာ (ကားပေါ်မှ ထွေးချလို့ လမ်းပေါ်လျှောက်နေသူတွေ မကြာခန ဒုက္ခရောက်ကြရ) နေရာအနှံ့ အုတ်နံရံတွေ ပြောင်တဲ့နေရာမှန်သမျှ ကွမ်းတံတွေးနဲ့မလွတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသား ဧည်သည်တွေ မကြာခဏ နှာခေါင်းရှုံ့ ဓါတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းယူနေလဲ ခတ်တည်တည်ပါဘဲ ရှက်ရကောင်းမှန်းလဲမသိကြပါဘူး ဘယ်သူမှကွမ်းတံတွေးထွေးဘို့ ခွက်တော့မဆောင်ကြပါဘူး၊ ဒီမှာကျွန်တော်တွေးမိတာ အဲဒီကွမ်းတံတွေးတွေ အပူရှိန်ကြောင့် ခြောက်၊ကားမောင်းတဲ့အရှိန်ကြောင့် လေထုထဲ (ဆေးရွက်ကြီးမှုန့်၊ ထုံး၊ကွမ်းသီးမှုန့်၊ဆေးမျိုးစုံ) ပျံ့လွင့်နေမှုကြောင့် ကလေးတွေ၊လူတွေ၊ရောဂါမရနိုင်ဘူးလားလို့ပါ၊
အဲဒီ အရည်လဲမရ အဖတ်လည်းမရတဲ့ ကွမ်းကိုစွဲလမ်းနှစ်ချိုက်နေကြတဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်ပါတယ် ၊ ကိုယ်ဖါသာကိုယ်ကြိုက်လို့စားတာ စားကြပါ ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ အရောင်မဆိုးကြပါနဲ့လို့၊
ကွမ်းတံတွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟာသလေးတစ်ခုကို သတိရမိတယ်ဗျ။
သေချာတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး ။ အလျဉ်းသင့်သလို ပြန်ရေးပြရရင် …
လ ကမ္ဘာပေါ်ကို ဘယ်သူတွေ အရင်ရောက်တာတုန်း … တဲ့ ။
ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေ အရင် ရောက်ခဲ့တာပေါ့ .. တဲ့။
မင်းက ဘယ်လိုလုပ် သိတာတုန်း … တဲ့။
မင်းကလည်း … ဟိုမှာ မမြင်ဖူးလား … အနီရောင် အကွက် ကလေးကို … တဲ့။
အဲဒါ ကွမ်းတံတွေး ကွက်ပေါ့ကွ … တဲ့ ။
ဒါနဲ့ မန္တလေးမှာ ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့ကစပြီး ကားပေါ်က စည်းကမ်းမဲ့ ကွမ်းတံတွေး ထွေးတာတွေကို အရေးယူနေတယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး စည်းကမ်း တင်းကြပ်လိုက်ရင်တော့ ကားပေါ်က စည်းကမ်းမဲ့ ကွမ်းတံတွေး ထွေးနေတာတွေ လျော့နည်း သွားနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းယာ ဆိုင်တွေကို တရားမ၀င် အဖြစ်ကြေညာ ပြီး .. ပိတ် ဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ် လို့ ကြားထားပါတယ်။ ခိုးရောင်းနေဦး မယ် ဆိုရင်တော့ လဲ မသိဘူး ပေါ့လေ။ သူတို့ ထမင်းအိုး တုတ် နဲ့ ထိုးသလို ဖြစ်မှာ လဲ စိုးရိမ် ပါတယ်။ ကားပေါ်က ကွမ်းတံတွေး နဲ့ ထွေးထွေး ချတာကို တော့ ရှုံ့ ချပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် အစင် ခံ ဖူးလို့ ကိုယ်ချင်းလဲ စာပါတယ်။ ကွမ်းသွေး ဟာ ပြန်ပျက် ဖို့ ခက်လို့ အစင် ခံ ရတဲ့ သူမှာ နစ်နာ ပါတယ်။ … အားပေးပါတယ် ဗျာ။
ကွမ်းယာရောင်းတဲ့သူ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်ခံပြီး ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်း။
အပြစ်ပေးရန် လွတ်တော်ကို တင်ပြ ပေးကြပါ။
ညီလေး ဒီပါကို ရေ။
အကျိုးပြုပို့စ်လေးတွေအတွက် ကြိုဆိုပါတယ် ညီလေးရေ။
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကို ပို့စ် နှစ်ပုဒ်ပဲ တင်ရမယ်လို့ ဒီမှာ စည်းကမ်းလေးရှိပါတယ်။
ညီလေး မသိသေးဘူးထင်လို့ ပြောပြပေးတာပါ။
ညနေမှာ ညီလေး နှစ်ပုဒ်ထပ်တင်တယ်။
သူကြီး ခွင့်ပြုရင်တော့ အေးဆေးပါ ညီလေးရေ။
အဲဒီ ကွမ်း ဆေး လဘက် ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့ကြီးကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား စွန့်လွှတ်ဖို့သင့်ပါပြီ။
ဆိုတာတွေကို သေသေချာချာသိမှ ကွမ်းစားခြင်းဓလေ့ကို ပယ်ဖျောက်နိုင်မယ်။
ရန်ကုန်မှာတော့ အမိန့်တွေ ညွှန်ကြားချက်တွေ ထွက်ပေါင်းများလှပါပြီ။
ဘယ်သူမှ မလိုက်နာပေါင်းလဲ များလှပါပြိင်္။
ကြုံဖူးပါ၏။ ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်မှာ အလှုသွားတာ အကျီ င်္အဖြူလေးဝတ်သွားမိပါတယ်။ မီးပွိုင့်မိနေတုန်း ဘေးက ဘတ်စ် ကားပေါ်က ကွမ်းသွေးထွေးချလိုက်တာ ပခုံးကနေတခြမ်းလုံးကုန်ပါရောလား။ အိမ်ပြန်ရေချိုး လိုက်ရတယ်။ အလှုလဲမရောက်လိုက်တော့ဘူး။ စိတ်ပျက်စရာပါ။
ထုတ်တဲ့လူ က စားလို့ပေါ့၊ ပထမ အဆင့် ကားသမားနဲ့ စပယ်ယာ တွေ လုပ်ငန်း ချိန် မှာတားမြစ် ပြီး အောင်
မြင်မှ နောက်တစ်ဆင့် တက်ပေါ့၊ မောလ် တွေ ပလာဇာ တွေ၊ ကွမ်းစားတဲ့သူ လုံးဝ မဝင်ရန် တားမြစ် ပေါ့
လူတန်းစားခွဲ လိုက်ပေါ့။ အကုန်ညှိ ရင် ရမှာပါ၊ အစ ဝယ်လိုအားနည်းနည်း ကျပေ မယ့် နောက်ပိုင်း အစဉ်
မန္တလေးမှာတော့ ကားပေါ်၊ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ အမှိုက် ကွမ်းတံတွေး မထွေးရတော့ဘူး လုပ်ရင် ဒဏ်ရိုက်မယ်လို. ကြေငြာထားပါတယ်ဗျာ…. စောင့်ကြည့်ကာလ တစ်လပေးထားပြီး ဖေဖော်ဝါရီဒီလကနေပြီး ဒဏ်စရိုက်နေပါပြီးဗျာ…
Mr black chaw ရေ သတိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ပထမနေ့ ကတင်တာမတက်လို့ apply လုပ်လိုက်တာထပ်တက်သွားတာပါ လူလည်ကျတာမဟုတ်ပါ အခုလဲခရီးထွက်ရတော့မှာမို့လို့ ဂေဇက်နဲ့ ၃လလောက်ဝေးရမယ်ထင်ပါတယ် ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ခရီးသွားအတွေ့ အကြုံတွေပြန်မျှဝေပေးပါ့မယ် အခွင့်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်